Consort: Teraka ny tontolon'ny Desktop vaovao ho an'i SolusOS | Avy amin'ny Linux
Consort: teraka ny tontolo Desktop vaovao ho an'ny SolusOS
anefa Akorandriaka gnome mitohy mihamatotra sy mihatsara izy io, mbola betsaka ny mpampiasa mbola tsy mahita ny lafiny tsara aminy ary aleony zavatra nentim-paharazana kokoa.
Tamin'izany fotoana izany no nanomboka teraka ireo forks na fork, araka ny fiantsoan'ny sasany azy, izay voafetra ho hafa ihany Shell for Gnome 3. Manana ny tranga Unity y kanelina, ity farany dia noraisin'ireo mpampiasa tsara hatramin'ny farany, fa novakiako tany ho any fa manolotra izy ireo fa io no birao manaraka Fedora.
Nefa ity Shell Tany am-piandohana dia nanana olana kely izy ireo: nilaina ny fanafainganana 3D mba hahafahana mamono azy ireo. Ny vahaolana dia avy amin'ny tanan'ny llvmpipe, izay mamela ny fandikana ny graf amin'ny alàlan'ny CPU izay tsy ahafahan'ny GPU, saingy misy ny fatiantoka ao aminy, toy ny mandeha irery amin'ny x86 na amd64 processeur.
Saingy miverina any am-pon'ny raharaha. GNOME ho solony, miaraka amin'ny Shell izay natombony koa Fiverenana GNOME, karazana birao nentim-paharazana (ary ratsy tarehy) fa amin'ny farany dia tsy hanohy ny fampandrosoana izy ireo satria ho azy ireo dia hampihemotra ny fivoaran'ny DE ity.
Ary amin'izay vao manomboka Ikey doherty (yep, mpamorona an'i SolusOS) izay niaraka tamin'ny ekipany dia namorona Fork an'ny Fiverenana GNOME, izay nataon'izy ireo batisa vadin'ny. vadin'ny miezaha sitrana tsy ny fisehoan'ny GNOME2, fa ny safidiny sy ny asany, araka ny hitantsika amin'ny pikantsary izay omeny antsika ao amin'ny bilaogy SolusOS..
vadin'ny ampiasao ny fork an'ny Metacity iza no anarany Consortium izay iasaina hamelabelarana azy GTK3 / Kairo, satria miorina amin'ny kinova 2.34 an'ny Metacity ary tetikasa saika maty ity. Antialiasing dia nampidirina ho an'ny zoro varavarankely sy plugins, ary koa lohahevitra lava,
Ny sasany amin'ireo singa amin'ny Consort:
Gnome-panel izao dia panel-consort
Nautilus dia Athena izao
Ny gnome-session-fallback dia ho lasa consort-session
Ny metacity dia Consortium ankehitriny araka ny efa nolazaiko anao.
Zava-dehibe ny manamarika fa miaraka vadin'ny ny fitoviana feno amin'ny suite GNOME mihitsy dia mbola tazonina. Ikey sy ny ekipany dia tsy hikasika na inona na inona avy amin'ny tranomboky lehibe, araka izany vadin'ny azo apetraka amin'ny ankamaroan'ny fizarana miaraka amin'ny GTK3 izy io, tsy misy olana. Navoaka ny solusOS 2 Alpha 7 miaraka amin'ny fanitsiana voalohany an'ity DE vaovao ity.
Afaka mahita antsipiriany sy pikantsary misimisy kokoa ianao ao Ity rohy ity.
Ireo izay te-hizaha toetra dia afaka mahazo ny kaody ao amin'ny repositories Github:
En Ny mason'ilay replika Izy ireo koa dia milaza amintsika an'izany ary manome antsipiriany hafa hodinihina.
Mahita ny isan'ny safidy bebe kokoa ateraka Akorandriaka gnome amin'ny fikarohana mafy ny zavatra nentim-paharazana na mahomby kokoa dia tokony holazaiko fa mahazo aina kokoa aho amin'ny fampiasana KDE, tontolon'ny Desktop izay mazava tsara amin'ny tanjony ary manatsara ny fahombiazany sy ny asany ny isaky ny dikanteny .. hoy aho.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Consort: teraka ny tontolo Desktop vaovao ho an'ny SolusOS
Eny, fahalalahana misafidy sy bla betsaka, fa raha ny marina, ny mpandraharaha orinasa lehibe (na olona) maniry hamorona ny rindranasan'izy ireo dia ho sarotra be ny mampiditra azy amin'ny ambaratonga avo lenta ao amin'ny rafitra. noho ny forks birao kely efa be mpampiasa ary amin'ny farany dia hifidy ny Gtk-ubuntu be mpampiasa sy ny hadalana izy ireo.
Mandritra izany fotoana izany, nandany ny ezaka natao hamoronana zavatra lehibe ao anatin'ny tontolon'ny birao lehibe roa.
Fantatrao, 'Iza no manarona famoretana kely'
Fa eny, inona no fahalalahana daka, fa rehefa tsy miseho mahavariana eo amin'ny biraonao ny programa X adidy dia fantatrao ny antony.
Marina izany, ny fahalalahana indrindra dia ny mahasarotra ny zavatra indraindray nefa izany dia faharatsiana hisintona foana ny OpenSource. Mbola ao amin'ny kinova ambony kokoa aho: KDE, Xfce, GNOME ary ity farany, ho toy ny kanelina farany safidy ..
Amin'ity tranga ity dia tsy afaka niresaka momba ny "fork" izahay fa ny "akorandriaka" samy hafa ho an'ny Gnome3, satria azonao atao ny mampiasa sh, bash, csh na ksh amin'ny kernel Linux, izay mahazo aina kokoa aminao. Ary araky ny voalazanao hoe: "mandaka fahalalahana", misy tsy mankasitraka azy, angamba ny fanaparam-pahefana dia "milamina" kokoa noho ny demokrasia, fa ny sasany amintsika mbola aleony ny fahalalahana ambonin'ny zavatra hafa rehetra. Salama.
Eny, saingy tadidio izany ohatra:
Ao ambadiky ny bara fandrosoana apetraka amin'ny sary masina-firaisan-kina Ubuntu dia misy kaody ao aoriany.
Ao amin'ny isan'ny fampandrenesana ny Ubuntu-firaisankina sy ny kisary fototra dia misy kaody ao aoriany.
Na ao ambadik'ireo lisitra haingana.
(Miala tsiny fa hampiasa ohatra gtk fotsiny amin'ny tsy fahalalana amin'ny hafa)
Ny tiako holazaina dia hoe izay rehetra ilainao handaharana azy io ary raha tsy maintsy mamorona kaody ianao hanararaotanao ny vaovao farany avy amin'ny tsirairay amin'ireo 'forkety na birao (vady) na isaky ny tontolon'ny birao (amin'ny ankapobeny)
Amin'ny farany, tsy mahazo rindranasa tsara tarehy toy izany ianao (eny, tompokolahy, manan-danja ny famolavolana, ary tsy mihoatra ny kely noho ny fampiasa) raha tsy hoe hanana tontolo iainana roa na telo ihany isika.
PS: Manaiky ny fanitsiana nataonao momba ny forks aho na dia tamin'ny fomba ankapobeny aza no niresahako fa tsy momba ny consort.
Heveriko fa tonga lafatra ny tadiavinao ny Freedom, avy eo aza mimenomenona rehefa manomboka ho faty ireo tetik'asa tianao indrindra ary manana olana amin'ny famelana tena, satria izany dia vokatry ny fandaozana ireo mpamorona izay handeha hitily (fork na jeneraly akorandriaka hafa ), raha tokony hanatevin-daharana ny hery sy hiezaka ny hiady hevitra (ny fifanakalozan-kevitra dia ao anatin'ny demokrasia koa;))
Ny zavatra tsy zakako dia ireo olona maniry Fahafahana be dia be (hoteneninao amiko ny antony ..., tsy maintsy hoe mampiasa tontolo birao 20 ianao miaraka amin'izay, na mampiasa mozika 14 hihainoana ny hira tianao indrindra miaraka amin'izay ...) avy eo izy dia mitaraina fa tsy manana fampiasa Y ny programa X raha toa ka misy ny programa Z, na dia sendra izany aza ny programa Z dia tsy mifanaraka amin'ny birao misy ahy na tsy manana fomba hametrahana azy aho satria manararaotra ny solosainako.
Ny fanatevin-daharana ny ezaka dia tsy fanararaotana, toy ny rehetra manao izay tiany hatao fa tsy demokrasia, dia fahavetavetana izany.
Satria tsy azonao atao ny manitsy ny fivoaran'ny lohahevitra satria fantatro rehefa afaka mamaly xD aho, ny tiako holazaina amin'ny farany (ary tsy miteny ho anao aho fa amin'ny ankapobeny) dia tena tsara ny Freedom (matotra, heveriko fa dia), fa raha midika kosa izany hoe 'kalitao ratsy kokoa' dia manomboka mahasosotra ahy kely izy io, miaraka amin'ny kalitao ratsy kokoa dia midika fa samy manao izay tiany ny mpamorona tsirairay, fa tsy mandray anjara amin'ny tetik'asa matanjaka, dia mamorona programa ho azy ireo izay ao anatin'ny 80% ny tranga dia hiafara amin'ny fandaozana azy, ary ny fampiasam-bola ny fotoana sy ny enti-miasa dia tsy misy ilana azy, na ho azy na ho an'ireo mpampiasa (very fotoana fotsiny izy ireo).
Amin'ny farany dia tsy maintsy manolotra mpisolo toerana 138 hafa ho an'ny Gnome Shell isika, ary toa mampihomehy ahy izany, noho ireo 138 dia 3 ihany no mendrika azy, izao lazao amiko, raha toa ireo tetikasa 135 ambiny tsy afaka niditra tao amin'ny Gnome Shell ary nandray anjara / manolotra hevitra vaovao ho an'ny fampandrosoana tsaratsara kokoa, izay no mety indrindra, mazava ho azy fa manitatra azy aho, raha toa ka mamorona fork 138 izy ireo dia hitifitra ny tenany ny Gnome fa ny "mandaka fahalalahana" toa zavatra "tena sarobidy" sy "amiko. tsy mety "amin'ny fiainana tena izy. Satria aleoko fa misy programa 2-3 fotsiny izay tena tsara sy mifanaraka amin'izay angatahiko, noho ny misy programa 20-23 izay tsy dia tsara loatra ary tsy misy manome ahy izay angatahiko.
Avy eo, amin'ny maha-mpampiasa ahy dia hahatsapa ho ratsy aho, ilaina ihany koa ny mahita hoe inona ny fahalalahana azo, satria miaraka amina programa fanovana horonantsary 5 dia malalaka ihany koa aho misafidy, sa tsia? angamba programa 57 no ilaina maimaimpoana tanteraka, na tsara kokoa 278, ka azoko antoka fa ho afaka aho 😀
Toy izany koa no mitranga amin'ny fizarana Linux (kohaka kohaka Hannah Montanna kohaka kohaka Linux), eny, ny Freedom no ronono (ary tiako holazaina izany) fa eo amin'ny tontolo iainantsika (ary mazava ho azy ny firesako ny zavatra niainako) dia miteraka olana amiko, satria tsy vita ny fahazoako izay ilaiko, fa raha manakaiky, ary izany dia vokatry ny fandaozana ireo mpamorona. Tokony ho hitanao fotsiny ny fangatahan'ny fangatahana mpiara-miasa.
Na izany na tsy izany, tsy handeha ratsy aho (lavitra an'io!) Saingy ny fahalalahana be loatra (ho an'ny fandotoako tena) dia teboka malemy an'ny Linux, toy ny fonosana (.deb .rpm .yoquesequa maro), tena ilaina / azo ampiharina ve? Mihevitra ve ianao fa na ny developer aza dia mila tsy maintsy manangona ny programa 6 in-2? Tsy ho azo ampiharina kokoa ve raha toa ka iray monja ny fanitarana raha tsy atao default? sa 1? Fantatry ny devs, ary matetika izy ireo dia mamela ny asa maloto any amin'ny fonosana isaky ny distro, apetrany ny kaody loharano ary manasa tanana izy ireo, fa ireo packager ireo koa dia mandany fotoana tsy maintsy manangona, ary tsy misy fonosana foana no alefany, ka ianao mila misintona fanangonana, ary mora kokoa ny manindry ny kisary ary nametraka azy fa tsy mila manangona (marina, marina? indrindra ho an'ireo mpampiasa vao ...)
Avy eo gaga ny olona fa tsy mahazo mpanaraka be dia be ny Linux (na dia nihatsara be aza ny raharaha).
Miarahaba (heveriko fa tsy namela na inona na inona aho hahaha)
Jereo, miaina eo amin'ny planeta iray "nahavita" olona isika, na angamba mpandraharaha ivelany namorona ny fiainana sy ny ain'ny olona. Na izany aza, izy ireo (na ny mpamorona na ny tany) dia manontany raha nanatanteraka tanjona iray isika na tsia. Namela antsika teny amin'ny habakabaka ihany izy ireo miaraka amin'ny fahafaha-mamerina sy mampivelatra ny tenantsika araka izay tadiavintsika. Ka ny marina dia tsy azoko hoe maninona ity ezaka hanatevin-daharana ny hery sy ny olona hahazoana "tsy fantatro hoe aiza". Mandroso? ny fivoarana miandalana? Andininy daholo izany !! Aza mamita-tena. Ny zavatra tsara indrindra dia vita amin'ny anarchie na dia matematika sy statistika aza dia toa tsy lojika na tombom-barotra. Ny GNU / Linux iray manontolo dia porofo manamarina izany, sa tsy izany? Voalohany ny olombelona, ​​avy eo ny asany. Ny rafitra tsy mihinana ny voanio. Aza miteny intsony! avy any atsimo, alunado.
NoUser dia hoy izy:
Manaiky aho fa tsara kokoa ny manambatra hery. Nefa indraindray tsy vitanao fotsiny. Raha tsaroako tsara, ny mpandrindra ny Consort dia nampakatra ny patch ho gnome hamerenana amin'ny laoniny ny fampiasa ao amin'ny gnome-panel, ary rehefa tsy nahazo antoka nandritra ny fotoana kelikely, dia nolavin'izy ireo ny fanovana satria tsy hanaja ny andalana namolavola azy. Fotoana kely taty aoriana dia nandao ilay tetik'asa izy ireo. Raha mikasa ny handao ilay tetik'asa ianao, maninona no tsy avelanao hitandrina azy io?
Taty aoriana dia hitako fa natolotra ara-dalàna izy hitahiry ny fonosana panneaux gnome (taorian'ny crossovers vitsivitsy faly amin'ny irc), saingy angamba tsapany fa handany vola be aminy ny birao gnome, dia nanapa-kevitra ny hanamboatra azy fotsiny izy, izay mamela azy hanana fahalalahana tanteraka.
Mamaly an'i NoUsuario
Mikasika ny fahalalahana, miaraka amina rindrambaiko maimaim-poana, tena manana izany ny mpamorona, manana izany voafetra bebe kokoa ny mpampiasa raha tsy mifanindry izy ireo amin'ny maha-mpampiasa azy, ny fahalalahana lehibe an'ny SL dia ny manova ny programa ary mizara ireo fanovana ireo, Ka, farafaharatsiny ho ahy, amin'ny maha-mpampiasa tsotra ahy dia tsy manana afa-tsy ny misafidy izay atao "hiraina" ho an'ireo izay mivoatra :). Momba ny fahalalahana manala baraka, andininy taloha ho an'ireo tsy te hametra ny fahalalahana fotsiny izany, tsy misy fahalalahana "be loatra", ny manelingelina anao dia ny tsy fisian'ny "marimaritra iraisana" eo amin'ireo tetikasa samihafa, hifanarahana amin'ny andalana ankapobeny, tanjona iraisana; Saingy zavatra iray izay tsy maintsy "milefitra" amin'ny faritra iray izay ahafahan'ny tsirairay manao izay tiany atao amin'ny kaody (Io tendrombohitra io). Misy safidy roa: ny fisafidianana "tyranny" tena mahomby, izay "mifanaraka" (firafitry ny piramidà) ny tsirairay na ny demokrasia (na ny fanjakan'ny mpanjaka, amin'ny lafiny politika) izay tsy fehezin'ny ao anatiny ny tsy fitovian-kevitra sy ny marimaritra iraisana. . na aiza na aiza, izany no safidy, toa ahy izany; ary mbola eo am-pelatanantsika (ny fiarahamonina) ny "hiparitaka" bebe kokoa ..
Anisan'ny Fahafahana be dia be, misaotra ny MATE sy XFCE efa misy. 🙂
Ahoana ny momba an'i Elav malalako.
Eny, io dia tena safidy tsara ary mieritreritra aho fa mendrika io fanararaotana io, na dia heveriko fa ny derivatives maro be mitovy amin'io dia tsy manao afa-tsy zavatra iray izay manasarotra zavatra fa tsy manatsara azy ireo. Amin'ny maha mpampiasa GNOME Shell ahy dia mahazo aina aho ary tsy malahelo ny birao taloha mihitsy ary ny fanovana natao tamin'i Nautilus dia tsara tarehy kokoa noho ny any aoriana satria maro amin'ireo fiasa ananany no ananako, misy ihany ny tsy fitovizany kely (amin'ny fanandramana azy. misaraka amin'ny lahy na vavy). Na dia nahavita asa lehibe aza i Ikey, heveriko fa tokony niandry ny hahita ny fanitarana izay ho hita ao amin'ny faritra 8 an'ny sampana 3 an'ny GNOME Shell izy ary raha izany dia ahafahana manana birao mahazatra tsy misy tabataba be.
Etsy andaniny, tsy nivadika ho Windows aho, eo amin'ny birao birao no misy ahy satria manana asa kely aho ary tsy manana fomba hanaovana azy amin'ny Linux (farafaharatsiny mba fantatro) satria tsy misy fampiharana mitovy na izay manana fampiasa mitovy aminy :-)) - (fampiharana hovolavolaina ao amin'ny Adobe Director).
Toetra anananao, ry malalako, ny mampifanaraka ny fanovana ... zavatra vitsy anananay no manana izany tombontsoa izany, saingy indrisy misy maro hafa izay mahazo aina amin'ny zavatra fantany ary rehefa mitranga izany .. .
Tsy haiko na hatsaran-toetra na loza :-), fa raha mizara zavatra iray mampiahiahy an'ity fanovana somary henjana ity aho. Naneho hevitra momba izany aho satria nahita ny asan'ny ekipa Elementary, Manjaro, Mint ary Ikey (raha tsy hitonona vitsivitsy) dia mety ho nahafinaritra ahy ny nahita zavatra mafy orina kokoa (aza diso hevitra aho) ary malama kokoa raha ny fanovana no resahina. Ny interface GNOME 2 dia saika ny tsara indrindra ary malahelo azy aho indraindray. Fa na izany aza, mpampiasa GTK misy rà mena aho ary na dia tsara sy mahafinaritra aza ny KDE sy ny QT amin'ny sehatra manokana dia tsy mahasarika ny saiko izany.
Mifanaraka amin'izay lazainao ary avelanao any ankavanan'ny Consort, ny marina dia manomboka mandreraka ahy ny "minono" ahy amin'ny Linux…. be fork sy ronono be…. tsy manam-petra ny tetikasa samihafa ary tsy manambatra hery amin'ny lafiny mazava na amin'ny lafiny inona izy ireo .. tranon'ny matihanina momba ny firaisana io, tsy lazaina hoe tranon'i p… .t… .s
Manomboka reraka aho, leo, ary saika hijanona amin'ny Mac OS X, na dia Hackintosh aza, dia mazava ireo.
Yoyo XD dia voajirika
Nampiasa OS X ihany koa aho ary mandeha tsara, fa tsy misy fahalalahana, ny zavatra ratsy dia ao amin'ny linux rehefa zatra gnome2 (ohatra) ianao dia mila manavao ny 3, rehefa mahazo aina aho ao amin'ny 3, 4 dia mivoaha ary ny fomba tokana hampiasana ireo birao miasa ireo dia ny forks fa aza miteny amin'ny RR
Mametraka fanontaniana aminao aho, ny fahafahan'ny inona? satria manao zavatra mitovy sy hitako izay nataoko tao amin'ny linux sy teo am-baravarankely, ny hany fahalalahako tsy ananako dia ny manova DE, izay tsy tadidiko koa, satria ny DE tiako ihany momba Linux dia kde
migule dia hoy izy:
Linux dia heverina fa loharano misokatra, ary Mac no zavatra mihidy indrindra eto.
Mamaly an'i migule
zerberros dia hoy izy:
Fahalalahana ho an'ny mpikirakira ny maka lozisialy (maimaim-poana) ary "hanao azy manokana", izany hoe mamorona fork.
Valio i zerberros
Amboary ny birao, ampifanaraho ny rafitra, atambaro ny rindrambaiko, fantaro izay napetrakao, imbetsaka dia tsy fantatra akory izay apetraka sy ny fampahalalana angonin'ny OS avy aminay, ny programa, sns, sns ary raha fintinina dia manana ihany koa aho nanao toy izany koa, mitovy amin'ny Win / OS X
ny amboahaolo dia hoy izy:
Tsy misy tsininy amin'ny maha mpampiasa anao dia mety tsy dia mahatsapa fangalarana fahalalahana ianao satria afaka nametraka mac sy ny programa anananao ary miaraka amin'ny serizy marikivy ianao dia mbola afaka mitroka izay tianao na dia mandoa ny vokatr'izany aza ianao .
Satria eo amin'ny ambaratongam-programmer, ny halatra fahalalahana dia azo antoka raha mahatsapa be dia be izy rehefa misy $$$ eo anelanelany na tsia? xD ary heveriko fa ny fananana karazana dia tsara, tena tsara, na dia tsy ratsy aza ny fidirana an-tsokosoko satria aorian'ny lohany roa dia mieritreritra tsara kokoa noho ny iray na farafaharatsiny manampy kely ny hafa ary ny zavatra tsy heveriko fa tena tsara dia ny fahazotoana avela any aoriana izy ireo dia tena napetraka mafy ary ny sasany mety manana toe-tsaina mihidy ka mahagaga fa sambatra izy ireo fa GNU / Linux ity ary misy zavatra ho an'ny rehetra.
Eny ary tiako ny miandany amin'ny atsy na ny aroa amin'ireo olana ireo fa misy ny mofo manelingelina raha nanapa-kevitra ny hiditra aho ary hanome hevitra tsy misy dikany.
Miarahaba ary manaova lelafo bebe kokoa izay mahafinaritra, tsara hoy aho hanehoana ny tsy fitovizantsika sy hahalala ny fomba fijery samy hafa.
Mamaly an'i elZorro
Izany no mahatonga ny programmer pithon hampiasa osx hatrany, izany no mahatonga ilay bandy wayland manao ny fampisehoana wayland mampiasa osx, sns sns.
Ary ny loha roa dia mieritreritra tsara kokoa noho ny iray, tsy maintsy miankina betsaka, eto amin'ny Linux dia tsy misy loha roa miray hina, misy roa sy iray isaky ny tetikasa samihafa. Tsy misy vokany any Espana ny fanapahana na inona na inona, na dia tsy ilaina aza izany. , saika ny programa rehetra ampiasainao amin'ny Linux, dia ataoko ao amin'ny mac izy ireo, ary raha tiako dia afaka manangona azy ireo aho. Gimp, Inkscape, blender, libreoffice, firefox, qupzilla, clementine, tomahawk, sns sns-
Fahalalahana mamorona rindranasa mifototra amin'ireo efa misy mampiasa ny kaodinao, tsy manadino ireo tahiry ara-toekarena manan-danja, na amin'ny rafitra na amin'ny fampiharana.
Saingy ireo rindranasa ireo dia mirona amin'ny rafitra hafa rehetra koa, amin'izay dia azonao atao ny mandray ny kaody libreoffice ohatra, raha eo am-baravarankely ianao.
Miaraka amin'ny hatsaran'ny cabarets 😛
Fantatro ianao ary izaho mihitsy no miaritra azy ary ny zavatra ratsy indrindra dia ireto derivatives ireto raha ny fijeriko dia izany: derivatives, izay ny asany dia ny mitazona ny fotoana taloha ho fahatsiarovana ny nostalgia ... ezaka be amin'ny fanaovana makiazy. ary ny fanovana dia azo ampiharina amin'ny anarana hanatsarana ny efa misy.
Ho ahy dia fihetsika tsotra tsy ahafahana miatrika ny ankehitriny.
Mitovy aminao ihany aho ary tamin'ny farany dia nanangana solosaina fotsiny aho ho an'ny hackintosh ary niafara tamin'ny olana aho.
Inona no tsy nampiasanao ny firefox sy ny fanidinana ary fanaovana ody ratsy?
Manova ny browser-ko isan-kerinandro, apetrako daholo.
Iray hafa izay nanao toy izany koa, nividy ny PC manokana ho an'ny Hackistosh aho ary nanomboka tamin'ny Tiger 10.4 ka hatramin'ny farany Mountain Lion 10.8.2 tamin'ny fampiasana ny DSDT.aml sy KeXT mitovy amin'ny Snow Leopard 10.6 ary tsy misy olana ...
Ratsy ny toe-tsaina 🙁
Tena halahelo ireo mpamorona fa "reraky" anao.
Ny marina dia manana antony marim-pototra hahombiazana amin'ny maha distro azy i SolusOS, ary tsy milaza izany aho satria ny famindrana ny haitao rehetra an'ny Gnome 3 mankany amin'ny Gnome Klasika manintona sy mailaka toa ny mbola tsy nisy nanao hatramin'izao, na satria Debian Stable ary tsy Ubuntu iray hafa Fa maninona, amin'ny farany, raha nahomby tamin'ny tombony kely kokoa ny Linux Mint (raha ny hevitro), maninona no tsy SolusOS?
Ho fanampin'izay, SolusOS dia nahazo haingana ilay teboka maha-izy azy izay manavaka azy amin'ny ambiny amin'ny birao sy manome azy ny toetra, miaraka amina vondrom-piarahamonina tena mavitrika mahatsapa fa nohenoin'i Ikey sy ireo mpiara-miasa aminy, izay mahatonga azy io tsy «fizarana tena tsara». Fa ambonin'izany, "ny ankamaroan'izy ireo dia tia azy.
Raha ny momba ny fanohanana tetikasa lehibe dia zaraiko ihany koa (ny tenako dia mampiasa ny Gnome Shell amin'ny openSUSE miaraka amina fanitarana vitsivitsy ary faly tokoa ..), saingy amin'ny tranga maro dia miasa altruistika ny mpamorona ary mahazatra azy ireo ny miasa zavatra tena izy ireo. toy ny (ny olana momba ny Gnome Shell sy ny fisaraham-panambadiana amin'ireo mpampiasa dia heveriko fa somary mivoaka any io ...) ary raha mila birao mahazatra i Ikey ary manohana azy ny vondrom-piarahamonina dia «tohizo!»
Ny fragmentation amin'ny GNU / Linux dia lohahevitra efa niadian-kevitra, saingy mieritreritra aho fa rehefa mamorona rindranasa ny olana dia avy amin'ny fiankinan-doha sy ny rafitra fonosana isan-karazany isaky ny distro
Miarahaba anao ary misaotra amin'ny fanonona Elav!
Pufff izay tsy hisy na inona na inona eo akaikin'ny Gnome Classical vaovao izay vao mainka poloney ny vahoaka Gnome ..
Ary raha tsy mino ahy ianao dia eto ny fampahalalana
Ampiarahiko am-panajana ity 'tolo-kevitra vaovao' ity ho fandaniam-bola sy fotoana tsy ilaina. fork hafa? avy amin'Andriamanitra ... maninona raha hatsaraina ny manager sy ny tontolon'ny birao efa misy ??? Raha ny isa mandeha, ny mpamorona rehetra misaraka amin'ny tetikasa iray satria tsy mahazo aina izy ireo dia hiafara amin'ny famoronana distro. ary tsy manandrana mandà ny fahalalahana aho, fa io toe-javatra io dia efa tonga amin'ny hadalana.
Tiako izany ary io no safidy tokana ahazoako aina.
Miombon-kevitra aminao aho, tsy ny fanaovana zavatra samirery izany, raha tsy manatevin-daharana sy manatsara izay efa vita!
elendilnarsil: Toa tsy marina ny nataonao, farafaharatsiny amin'ity tranga manokana ity, Eny heveriko fa fandaniam-bola matevina (amin'ny fikolokoloana birao iray manontolo misy teknolojia taloha). Na Unity / Shell, izay amin'ny farany manao zavatra mitovy (na azo tratrarina ao anaty akorany miaraka amina plugins roa). Canonical dia tokony hiaraka amin'ny ezaka miaraka amin'ny gnome ho an'ny interface tsara kokoa).
Saingy tsy nikapoka ahy ho toy ny ezaka tsy ilaina (kanjo diso) ny kanelina. Misy ireo mpampiasa te hanohy hampiasa ny gnome3 miaraka amin'ilay interface efa nananany tao amin'ny gnome2. Nandray dingana tamin'io lalana io ny kanelina. Naveriny indray anefa ny kodiarana. Ny teknolojia hahatratrarana azy dia efa nisy, gnome-panel, na dia saika nilaozana aza. Avy eo nandao ny gnome-pan panel i gnome ary tamin'izay fotoana izay ihany, rehefa tsy nisy nitahiry azy, dia nokasihin'i Ikey mba hihazonana azy velona. Tsy misy fork panel-gnome hafa ao amin'ny kinikany grtk3. Consortie solo.
Ny tombony azo noho ny Kanelina dia be. Kanelina dia manohy manampy ireo fampiasa tsy hita. Efa manana ny zava-drehetra i Consort. Cinnamon dia manana fototra applet / plugins. Consort dia manana izay rehetra nananan'ny gnome-panel. Na i Ikey aza dia manangana fanohanana an'ireo applet python gnome2. Manohana saina ubuntu. Ny fahasamihafana dia goavana. Ikey dia nanao, izao, izay tokony ho kanelina hatrizay.
Azoko tsara izay lazainao ary marina fa nanambola ratsy i Mate. Tsy azoko hoe ahoana no ahafahan'izy ireo mifandray amin'ny kaody efa lany daty, na izany aza, manaja izany aho. Ankehitriny, miombon-kevitra amin'i Elav aho amin'ny resaka tontolo iainana izay ampiasako sy hizahako toetra tsy tapaka: KDE, Gnome, XFCE ary ary amin'ny tranga farany Kanelina. Ary raha mpitantana io dia miloka amin'ny Openbox aho, na dia manintona ny saiko aza i Awesome.
Ity dia iray hafa amin'ny tombony lehibe an'ny Consort. Izy io dia mifanaraka amin'ny Gnome, amin'ny endriny. Izay miasa amin'ny gnome - ny zavatra rehetra ankoatry ny akorandriaka - dia hiasa ao Consort. Avy amin'ny mason'ny hena, dia ny gnome 3 izy io, fa ny akorandriaka nosoloin'ny tontonana. Izany dia mahatonga ny consort tsy misy afa-tsy amin'ny fonosana roa misy azy ary ny ambiny dia mampiasa ireo mitovy amin'ny gnome3. Izay mitazona ny lahasa fikojakojana ho an'ny mpamorona farafaharatsiny.
Misy an'io antsipiriany io fa misy karazany maro ny tontolo desktop, azonao an-tsaina ve ny tontolo GNU / Linux izay tsy nisy afa-tsy birao tokana 1 (na gnome na kde) toy ny amin'ny windows na mac izay 1 fotsiny, ny karazany dia ao amin'ny ny tsiro ary mifidy izay mety indrindra amin'izy ireo ny tsirairay ary mandray izany antony izany dia ny GNU / LInux dia ambony noho ny lafiny rehetra amin'ny OS hafa!
Tsara ny karazany, mety misy safidy hafa, izay fantatro, 4 na 5, raha misy 42 mpisolo toerana an'ilay zavatra manomboka manahy kokoa izy io, satria azo antoka fa ny "pijadas" no ankamaroan'ny safidy hafa:
"Aaay dia izao ny Gnome Shell dia tsy manana afa-tsy bara iray eo an-tampony ary tiako ny iray eo an-tampony ary iray any ambany satria izany no iasako amin'ny fomba ahazoana aina kokoa, aaaa ary izany no nolazaiko nefa tsy nanandrana ampifanaraho amin'ny Sheeeelll vaovao, dia toy izany aho.
Ary mikasika ny fehezanteny farany nataonao dia misy ireo mpampiasa (ao anatin'izany ny tenako) izay tsy misy mifanohitra amin'izy ireo na iza na iza, nahoana? satria ny antsasaky ny volomboasary dia amin'ny tendrony avaratra ary ny antsasany kosa amin'ny tendrony atsimo, ka tsy misy ilana azy mihitsy aho, mila manao zavatra hafahafa aho. Mazava ho azy, amin'ny farany mahomby ianao, satria ny maniry no fahefana, hoy izy ireo, nefa mbola manelingelina anao ihany izany.
ninbusbs60 dia hoy izy:
azafady ny tsipelina nataoko fa mazava ho azy fa ny forks maro no mamoy fo ary amin'ny farany mitovy daholo ireo rehetra ireo, fa tsy ny forks rehetra ataon'izy ireo, dia hanokan-tena izy ireo handoto ny tontolo iainana tany am-boalohany, amin'ny trondro gnome, na dia napetraka amin'ny solosaina Mahery vaika ihany koa ny maka fotoana aorian'ny fidirana
Valiny tamin'ny ninbusbs60
elip89 dia hoy izy:
Asa tena tsara avy amin'i Ikey Doherty, manantena ity kinova SolusOS ampiasainy Pisi ity
Mamaly an'i elip89
Ho an'i Ikey Doherty, te-hilaza aho fa herintaona lasa izay dia efa nanandrana nifandray tamin'ny mpamorona Gnome sy mpikojakoja ity birao ao Debian ity izy, nefa tsy nihaino intsony hoe nihaino azy tamin'ny soso-keviny izy ireo, na dia namaly azy aza izy ireo ( io no kinova Ikey, eny, araka ny voalaza ao amin'ny Google +). Na izany na tsy izany, nofinofy ny fatratra ny hiray saina eo amin'ny tontolon'ny Linux, ary mety tsy misy antony tokony hisy ihany koa. GNU / Linux no izy ary eto amin'ity fiainana ity dia misy tombony sy fatiantoka ny zava-drehetra, eny fa na dia ny fahalalahana aza. Amiko, ny tombony dia mbola lehibe lavitra noho ny fatiantoka, saingy io dia efa raharahan'ny tsirairay avy.
Manana tombony tsara izy io, toy ny tontolon'ny birao tena mazava be izay manelanelana amin'ny fampiasana ny console fotsiny sy ny tontolon'ny birao, izay tena tsara ho an'ny solosaina tena maivana na ny fanaovana mpizara trano ary tsy hatahotra fotsiny ny mahita ny terminal.
Fa heveriko fa ny tianay holazaina dia ny misy safidy vitsivitsy, arakaraka ny filàna, fa mba hamitana izany filana izany ihany dia misy ny "vilany" satria tsia, dia amin'izay no mizarazara ny ezaka ary very ...
Inona no tsy itovizany amin'ny tetik'asa MATE DESKTOP, satria tsy misy ny vady sy voila.
Raha ny fahalalako azy dia fork an'ny GNOME2 ny MATE, izany hoe mampiasa tranomboky sy rindranasa efa ho lany andro. Ny hampiasana ireo teknolojia vaovao dia ny hampiasana azy ireo, saingy ampifanaraho amin'ny maso izy ireo hitovy amin'ilay taloha 😀
Toa madio sy tsara tarehy ary tsotra ilay izy. Tsara izany, angamba hanandrana aho, mieritreritra izy ireo fa hisy fiatraikany amin'ny debian-dry zareo ireo na tsia raha tsy tokony apetrako izy ireo.
Manomboka amin'ny lohahevitra lehibe ... ... Heveriko fa ny fanapahan-kevitry ny SolusOS dia tsy diso tanteraka ... ary ny fomba fifantohan'izy ireo amin'izany dia dinihina tsara. Eo amin'ny lala-mahitsy ny Gnome amin'ny tsy fanarahana ny Gnome Fallback azy, ary vondrona iray maniry zavatra klasika tsy mila fanafainganana 3D, manome mpampiasa betsaka vintana ... indrindra ny vondrom-piarahamonin'izy ireo manokana izay mangataka zavatra mitovy amin'izany.
Raha ny momba ny fahasamihafana lehibe amin'ny tetikasa ... Heveriko fa zavatra iray izay mahatonga antsika ho saro-pantarina sy hahafantatra antsika koa ao amin'ny tontolon'ny GNU / Linux ... ... tetikasa maro no mijanona tsy mijanona, maro hafa no mandroso ... fa ny tena zava-dehibe, raha ny fahitako azy dia ny fahitana ireo fivoarana rehetra ireo ... ary hampiasana ireo hevitra ireo araka izay tadiavinay, izay tsy manam-paharoa amin'ny fork tsirairay avy, misy maro izay afaka mamindra azy ireo amin'ny tontolo iainany. Inona no tiako holazaina? Midika aho fa manana fahalalahana hanao izay tiana amin'ny zavatra tsirairay isika .. ..ary manome ahy fahalalahana hanao izay ahalalako ny tontolo iainako ho mety indrindra sy mifanaraka amin'ny filako manokana .. .. misy zavatra tsy maintsy tazomintsika tsara amin'ny kaonty, ary na dia eo aza ny tontolo iainana tsirairay (ohatra ny Gnome, KDE, QT) namboarina tamina tanjona sasantsasany ... na firy na firy no tadiaviny dia tsy afaka manome fahafaham-po ny filana manokana rehetra ampiasain'ny olona tsirairay izy ireo (tsy lazao ny fomba hitoeran'ny dikanteny)
Toa ahy ... azo antoka fa maro no tototry ny DE maro azo isafidianana ary ireo fanovana tsy tapaka tokony hamboarintsika. Raha ny amiko dia aleoko mijanona miaraka amin'ny Openbox toy ny mijoro irery-WM, izay miova tsy isalasalana fa hitranga .. satria ny fanavaozana farany dia ho an'ny 2011 .. Nampifanarahiko tamin'ny filako izany, ary ampiako ny mampiavaka azy .. .. Ary izany dia fahalalahana lehibe! .. ..ary azoko antoka fa ny olona tsirairay avy dia azo ampifanarahana amin'ny filan'izy ireo amin'ny DE feno, na ireo voalaza ..
Raha fintinina, ho solon'ny zavatra tsy tiantsika ... na manandrana manampy, na mitatitra izahay ... na mamorona azy ... ... ary izany fahasamihafana lehibe mitranga izany ... ny forks ... no nahatonga an'io safidy io izay tsy nanana an'io olona io ...
Ary rehefa tonga izy ireo nilaza hoe: «Hoy aho» ..: D .. Miarahaba ..
Kanelina, Mate ary Consort ankehitriny. Tetikasa telo misy tanjona mitovy amin'izany. Manantena aho fa handresy ny iray ary ireo resy dia hiditra ao amin'ilay mandresy. Tsy azoko hoe inona no mitranga amin'ny GNOME, ny fanitarana GNOME Shell dia tokony hamela fanaingoana. Tsy tsara kokoa ve ny mamolavola fanitarana vaovao ary apetraka sisin-tany be dia be?
Angamba azonao amin'ny famakiana ity tafatafa nifanaovan'izy ireo tamin'i Ikey ity.
Toa tsy te hijanona eo anelanelan'ny rano roa i Ikey. Ianao dia mila birao toy ny GNOME 2, mifanaraka amin'ny GNOME 3, ary tsy mila fampivoarana fitaovana (na llvmpipe) hiasa tsara amin'ny milina maoderina efa tonta. Tsara izany hevitra izany fa mbola mieritreritra aho fa be loatra ny tetik'asa mitady zavatra mitovy (mamerina amin'ny laoniny ny birao mahazatra).
Heveriko fa mitovy aminao ihany. Be loatra ny tetikasa mitady zavatra mitovy. Fa raha tsy maintsy misafidy izay làlana tsara aho dia heveriko fa ilay nofidian'i Ikey no tsara indrindra. Ny hafa (Mate, Kanelina, ilay maody gnome-shell mahazatra) toa diso lalana amiko.
Ny Mate dia, ny fahitako azy, ny ezaka ratsy indrindra notarihina (tsy nataon'ny olona, ​​aza diso). Miorina amin'ny teknolojia tsy voatazona (gtk2) izay manery ny ekipa hanao ezaka lehibe hamahana ireo bibikely hita, na hitodika amin'ny fomba hafa mba tsy hamahana azy ireo.
Raha ny Kanelina kosa dia saika hamboarina amin'ny tontolo klasika vaovao navoakan'ny ekipa gnome (ezaka very maina izany! - tokony hahita fomba fampidirana kanelina ny ekipany ny gnome, na farafaharatsiny mba hanomezana azy ireo kanelina ho an'ny traikefa gnome2 amin'ny gnome3) mifototra amin'ny plugins fotsiny.
Ohatrinona ny talenta very amin'ny tetikasa tsy misy ho avy na kely!
Manaiky tanteraka ny hevitrao aho.
Misaotra tamin'ny lahatsoratra. Tiako ny karazany. Mahatonga anao hanana fahaiza-manao vaovao amin'ny toe-javatra vaovao. Ary na dia miteny aza ny sasany hoe akorandriaka na fork, dia mandeha ny zava-drehetra, ka ny fiandrasana ny hiverina amin'izay nisy azy dia tsy dia mitombina loatra. I Consort dia vahaolana, heveriko fa handroso. Heveriko fa tsy hiverina intsony ny fikasany.
Samy misy safidy.
Consort no fomba mety hiarahana amin'ny tranomboky gtk3, mbola tsara lavitra noho ny Kanelina izay tsy mahatratra ny fahatsorana, fanamboarana, fanamorana sy famokarana gnome 2 miaraka amin'ny tranomboky gnome 3.
Eo akaikin'ny KDE ny filokana tsara indrindra eo amin'ny birao.
Manantena aho fa manana kinova miorina tsy ho ela ianao hametraka amin'ny debian sy ny derivatives.
Eny, afa-po be aho tamin'ny fitsapana an'i Xiance Debian. Mate dia tiako izy io tamin'ny fotoana iray, raha ny tena izy dia natolotro ny olona rehetra amin'ny ankamaroan'ny lahatsoratro tao amin'ny Taringa sy Consort fa hitako fa tena mahaliana, saingy raha jerena ny herin'ny xfce ankapobeny, nahoana aho no miverina amin'ny asany, fisehoana - fanaingoana sy hafainganana nomen'i xfce ahy? Ilaina ny mahita ny fanjifana loharanon-karena hananan'ity birao ity sy ny tena fahafaha-manao azy ... Efa nanandrana ny Gnome-shell, Cinnamon, Mate, KDE, Unity, Lxde ary Xfce ho DE feno izy ireo ary tena ilay mahafa-po ahy indrindra dia i Xfce 🙂
buuuuuuuuu ho tara amin'ny lelafo ¬¬ hahaha
Eny, araka ny filazan'ny sasany, raha toa ka mihodina mitovy daholo ny tetikasa, heveriko fa handroso kokoa ity sambo ity: /
Tsy tara loatra amin'ny lelafo XDDDD
Mino aho fa samy manana ny sambony avy ny tsirairay fa tsy samy milomano mankamin'ny alehany ...
Ho an'ireo izay mieritreritra fa XFce no mampiasa loharano kely indrindra, marina izany ary koa Lxde. Saingy misy iray izay hanao ny fifaninanana ary tena matotra dia i Razor-Qt.
Rehefa mandeha any amin'ny tranomboky gtk3 ihany koa i xfce dia hampiasa loharanom-pahalalana bebe kokoa mitovy amin'ny lxde fa Razort-Qt dia ampiasainao ireo KDE 4.x ary isaky ny kinova vaovao dia manatsara ny fihinanana izy ireo.
Izany dia nilaza fa ny fenitra iray dia tsara kokoa amin'ny solosaim-birao toy ny amin'ny lafiny hafa amin'ny rindrambaiko maimaimpoana, ny installer, ny fizarana reny, ny kinovan'ny compiler sns ...
Saingy mbola mieritreritra aho fa i Consort sy i Kde no ho referansa eo amin'ny birao amin'ny masinin'ilay faritra antonony sy avo lenta.
trosky dia hoy izy:
Salama… ny mampanahy ahy dia ny fiovana tampoka. Tokony hanana làlana voafaritra io. Ary aza manandrana manandrana zavatra be dia be.
Ity fanovana tampoka ity dia manahirana ahy ... satria zatra mampiasa tontolo iainana ny olona, ​​manova azy sns ... ary mora kokoa ny mampiasa azy amin'ny fahalalana azy. Ny tontolo vaovao tsirairay dia mitaky fahaizana mianatra sy manavao azy ao. Tsy kamo ilay iray fa ny fitoniana no mamonjy ny iray tsy ho toy ny baolina ping pong. mahafaly
Amin'ireo latabatra 3 izay te hanana ny fijery Gnome 2, ny iray izay manao ny tsara indrindra dia Ikey, satria ny vady dia tetikasa vita amin'ny haitao maty sy ny kanelina, na manao ahoana na manao ahoana no anaovany azy, dia misy mahalala fa lalina izany. dia io Gnome-Shell io ihany izay maharikoriko ny olona. Ary koa, raha vantany vao vita ny fijery, dia hanomboka hivoatra i Consort ary ho lasa ankafizin'ny Gnomers taloha.
Tiako ny kanelina. Marina fa afaka manatsara zavatra maro izy io, saingy hitako fa azo ampiasaina sy azo alamina kokoa noho izy io Akorandriaka gnome.. Resaka tsiro angamba.
Misy lesoka ao amin'ny archlinux T___TU
Ahh! ankilany - toa tsara ilay script vaovao, mikendry ny fahatsorana hatrany. Hey yoyo Gaga aho tamin'ny sasany tamin'ny fomba fiteninao, toy ny hoe diso fanantenana ianao tamin'ny tetik'asa Solus OS, izay iray amin'ireo mafana fo indrindra hitako hatramin'ny vao tsy ela akory izay. Izaho kosa manana faharetana, tsy misy afa-tsy fomba 2 hitomboana na hanjavona, tsy maintsy manome fotoana an'ity fizotry ny fivoarana sy ny fampiantranoana ity isika - izany no antony anohizako ny fampiasana linux amin'izao fotoana izao hiandrasana solus versi 2 tsy maimaika. Rehefa mivoaka ny 1.3 dia hozahako ihany koa… .Ny mandroso….
Telonohorefy dia hoy izy:
Mampiasa linux amin'ny solosaina hafa aho ... izany hoe ny tiako indrindra. Manoratra amin'ny win7 aho anio, saingy tsy misy…. Mampiasa boot roa aho Ary toa hitako fa raha manana ny toetrany manokana i solus, ary manaraka dingana hentitra mankany amin'ny fanamafisana amin'ny maha reny distro azy, dia toa hitako fa hanana ny akany manokana ao anatin'ny tontolon'ny linux. Notsidihiko hatramin'ny voalohany ny kinova navoaka. Ho hitantsika izay mitondra antsika tsy ho ela. Ny Windows ampiasako azy tsy misy eritreritra diso dia manohy mandiso fanantenana ahy na dia "ao amin'ny fianakaviana" aza dia manaraka ny fanao amin'ny fampiasana azy io ary mila mitazona azy ianao na dia safidy OS faharoa aza. Ho an'ireo mbola tsy zatra Linux na matahotra an'io. Saingy miova tsikelikely izany …… ny fampiasana OS maimaim-poana. Mihanaka hatrany hatrany ny GNU / linux. Miarahaba an'ireo namanao Linux rehetra.
Mamaly an'i orion
Ary ity consort ity dia tsy mihatra amin'ny android na olona mampihatra azy amin'ny android?, Satria novakiako teo fa tsy mila carte graphique izany.
Fedora 18 Torolàlana momba ny fametrahana tsikelikely
HD Magazine # 3 misy